७१ वर्षको उमेरमा सम्बन्धविच्छेद,४८ वर्षको उमेरमा भएको प्रेम-विवाह भएन सफल!! | बिगुल न्यूज
७१ वर्षको उमेरमा सम्बन्धविच्छेद,४८ वर्षको उमेरमा भएको प्रेम-विवाह भएन सफल!!
लिबाङ, रोल्पा, रोल्पामा ७१ वर्षको उमेरमा एक जोडीले आज जिल्ला अदालत रोल्पाबाट सम्बन्धविच्छेद गरेको छ ।
जिल्ला अदालत रोल्पाका मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा दामोदर दाहालका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा मात्र यस अदालतमा अहिलेसम्म ९७ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेका छन् । विगतका वर्षहरुमा जस्तै यस आवमा पनि जिल्ला अदालत रोल्पामा अन्य मुद्दाको तुलनामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढी नै भएको पाइएको छ । -रासस
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ३०, २०७४१९:५४
चितवनमा बसको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु, चार घाइते